Kiiniya oo ku qarxisay Muuse Biixi: Waxba kuuma hayno ilaa Farmaajo dhacayo - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Waxa dhaaftey mudadii Kiiniya qabsatey inay qunsuliyad kaga furato Hargeysa oo ahayd bishii hore ee ina soo dhaaftey. Muuse Biixi ayaa xogtu sheegaysaa inuu dhowr jeer wacay Kiiniya laakiin aakhirkii loo sheegay Farmaajo welli waa joogaa.
”Kiiniya ayaa filaysay in Farmaajo lumiyo xukunka doorashada dadban laakiin markii ay ogaatey in taagerada uu haystaa ay balaaran tahay ay Axmed Madoobe ku tiri sidii loo meelmeerin karo hala sameeyo oo ay ku jirto inuu ka tanaasulo musharxnimada ayuu yiri Cali Calasow.
”Kiiniya hadda war uma yaalo waxayna u baahan tahay dawlada dhexe inay ogolaansho ka hesho si ay qunsuliyaduga furato Hargeysa qaadkeedana u gadato ayuu raaciyay Cali Calasow.
Waase habeenkii xalay oo tagay inay taas ka hesho dawlada dhexe ee uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo. Kiiniya aya filaysay in bishii Febraayo doorashadu dhacdo oo uu soo baxo mid ka mid fadhiidyada inkastoo aanu jirinba wax karti leh oo barlamaanku dooran karo hadda.
Si kastaba ha ahaatee qaadka Kiiniya wuxuu sugayaa laba sano oo dambe, waaba haddii laga guulaysto madaxweyne Farmaajo.